Enwere ike WeChat kwụọ Malaysia iji na China? - zuru ike na mba ndị na-ekpo ọkụ
Enwere ike WeChat kwụọ Malaysia iji na China?
Ndị mba ọzọ nwere ike iji WeChat Pay na China?
Obodo ndị ọzọ nwere ike iji WeChat Pay?
Enwere m ike iji WeChat Pay na Malaysia?
Malaysia Alipay nwere ike iji na China?
Ị nwere ike nweta WeChat Pay na-enweghị akaụntụ ụlọ akụ China?
Kedu otu m ga-esi tinye ego na WeChat China?
Enwere m ike iji WeChat n'ime anyị?
Kedu obodo na-eji WeChat?
Kedu otu m ga-esi mepee akaụntụ WeChat na Malaysia?
WeChat ọ na-ewu ewu na Malaysia?
Kedu nke ka mma Alipay ma ọ bụ WeChat Pay?
Enwere m ike iji Alipay na-enweghị akaụntụ akụ China?
Ndị mba ọzọ nwere ike iji Alipay na China?
Enwere m ike iji UnionPay na Malaysia?
Ndị ọrụ nwere ụgwọ WeChat nke ọtụtụ mpaghara (China's Mainland, Hong Kong Special Administrative Region, South Africa na Malaysia), nwere ike họrọ mpaghara WeChat Pay.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ n'ụwa niile na-eji WeChat na-ekwurịta okwu. Ndị mba ọzọ enweghị ike iji ọrụ ịkwụ ụgwọ WeChat were ndị China nyefee ego n'efu ma ziga envelopu uhie.
Na 2019 a kọrọ na ndị ọrụ China nwere ike iji WeChat Pay in Mba 25 na-abụghị China, gụnyere, Italy, South Africa na UK.
WeChat Pay dị ugbu a na Malaysia, na nke ahụ pụtara na ị nwere ike izipu ego na ndị ọrụ WeChat ndị ọzọ, na ịzụ ahịa n'ịntanetị ma ọ bụ n'ụlọ ahịa, na-enweghị mkpa iburu obere akpa gị ma ọ bụ kaadị akụ.
Ọmụmaatụ ọnụ: izipu 1,000 MYR na akaụntụ CNY na China
Ọ dị mma ịmara na na Wise, ị nwekwara ike zipu ego ozugbo na akaụntụ Alipay na China - ezigbo ụzọ iji nweta CNY ndị enyi na ezinụlọ gị ebe ahụ. Ma ọ bụghị naanị China.
Nke a dị mkpa: A na-anabata ikike ịnya ụgbọ ala Singapore nke mba ụwa?
Naanị tinye nọmba kaadị kredit Visa gị ebe a n'agbanyeghị na ọ dị ọ bụghị akaụntụ ụlọ akụ China. O kwesịrị ịrụ ọrụ. Ugbu a na-emekarị nke a bụ ebe WeChat nwere ike ịjụ gị maka ozi ndị ọzọ dị ka ID gị na nkọwa paspọtụ wee gaba n'ihu ịnye ozi ahụ. Ugbu a, WeChat na-ahapụ ndị mba ọzọ ka ha gaa n'ihu na ya.
Soro usoro ndị a iji rịọ na zipu ego na WeChat Wallet:
Budata ngwa WeChat. …
Hazie akaụntụ WeChat gị. …
Mee ka WeChat Pay rụọ ọrụ site n'ime ka mmadụ zigara gị ego. …
Tinye kaadị kredit ma ọ bụ nọmba akaụntụ ụlọ akụ China. …
Hazie mbufe gị. …
Gosi ego mbufe gị.
Iji kwụsị ndị ọrụ US iji WeChat, Ngalaba Azụmahịa nyere iwu ka ụlọ ahịa ngwa America, dị ka Apple's na Google, ghara ịnabata ngwa ahụ ma ọ bụ ịnye mmelite nchekwa nye ndị ọrụ dị ugbu a. … N'ihi na-etinye ọ bụghị naanị WeChat ọrụ n'ihe ize ndụ, kamakwa onye ọ bụla ha na-akpakọrịta.
Obodo gụnyere USA, Canada, Switzerland, Singapore, Japan, South Korea, Thailand, Maldives, Hong Kong, Macau, Taiwan, Australia, New Zealand na mba ndị na-abụghị ndị Europe, agbanyeghị, ewezuga mba Europe dị ka UK, France, Germany.
Kedu otu m ga-esi debanye aha maka WeChat? Mepee ngwa WeChat na kpatụ Debanye aha > Jiri mkpanaka debanye aha > họrọ koodu mpaghara gị, tinye ekwentị mkpanaaka gị, ma tọọ paswọọdụ. Mepee ngwa WeChat wee pịa Debanye aha> Debanye aha site na Facebook, wee wegharịa WeChat na Facebook ịrịọ ikike ịbanye na WeChat.
Nke a dị mkpa: Enwere ezigbo ahụike na Vietnam?
Malaysia nwere ihe karịrị nde ndị ọrụ ịntanetị 26 na Jenụwarị 2020, WeChat wee bụrụ nke a họọrọ dị ka 6th kasị ewu ewu na-elekọta mmadụ media ikpo okwu na Malaysia, na ihe karịrị 100 nde nbudata na Google PlayStore. Mgbasa ozi WeChat nwere ike iru ndị ọrụ Malaysian 20 na-arụsi ọrụ ike n'ime otu ọnwa.
Ụgwọ ọrụ na Alipay dị elu karịa WeChat Pay. … Enweghị ụgwọ azụmahịa ọzọ. Ọnụego mgbanwe. Ma Alipay's eWallet na WeChat Pay enweghị ọnụego mgbanwe ego n'ime ngwa.
Ọ bụrụ na ị nọ na kọmpụta - Jiri Alipay na-enweghị akaụntụ ụlọ akụ China. Ịnwekwara ike nyochaa Alipay site na iji kọmputa gị, ebe a bụ usoro ndị a: Gaa na Alipay, banye wee gaa na Ntọala Akaụntụ (账户设置).
Ndị mba ọzọ nwere ike iji AliPay na China? Ee, AliPay dị maka onye ọ bụla iji na China, ị nwere ike iji ya na Bekee ma ọ bụ Chinese nke pụtara na ọ dịkwa mma maka ọtụtụ iji.
Na Malaysia, kaadị UnionPay bụ anabatara na ihe karịrị 90% nke ATM maka ịwepụ ego mpaghara (Ringgit). ATM ndị a bụ nke Maybank, Hong Leong Bank, Public Bank, RHB Bank, CIMB Bank, Bank Rakyat, Affin Bank, Standard Chartered Bank, HSBC na Citibank.
Enwere esemokwu na Indonesian?
Kedu uru ọ dị na ịnọ na Asean?
Gịnị mere US ji lụọ Cambodia agha?
Ala ugbo ọ bụ ezigbo ego na Philippines?
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji nweta Singapore PR?
Ọ bụ iwu kwadoro ịgbachitere onwe ya na Philippines?
Ọ dị mfe imepe azụmahịa na Thailand?